ExactTarget Inotora Kwevatengi Sevhisi kumusoro Yakakura (Yemagariro) Notch | Martech Zone
China, July 9, 2009 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Mangwanani ano, ini ndagamuchira email kubva kune vanhu vari ExactTarget izvo zvakataura kuti yavo portal yevatengi yakanga yagadziridzwa kuti isanganisira kesi manejimendi. Izvi hazvisi chero diki mutengi portal, hazvo! ExactTarget 3sixty inoshanda zvakazara mutengi-centric social network iyo inosanganiswa ne kesi manejimendi, chigadzirwa kurudziro, mumwe raibhurari yekudzidzira uye forum kuti vatengi vabatsirane.
Ndakatarisa kune ExactTarget nhasi uye iwe waigona kutaura yavo yaive ruzha mumhepo! Jeff Rohrs, Mitch Frazier naStephanie Zircher vese vakanditumira ruzivo rwakakura pamwe nemamwe matanho anonakidza. Makorokoto anoenda kuna Stephanie pane kuvhurwa uku ... anga achishamisa pandakamboshanda mhiri kwake uye anokodzera kupihwa mbiri pamwe nechikwata chake pane izvi zvinoshamisa zvinowedzera.
3sixty ikozvino yave nenhengo dzinopfuura zviuru gumi nezvitatu
Vanoda kusvika zana pfungwa dzevatengi dzakakurudzirwa nezvechigadzirwa chaive chaitwa kuburikidza nemhinduro pane makumi matatu
Global chigadzirwa rutsigiro 24-7? online kuburikidza neRedOffice + rutsigiro rwefoni kubva kuMutengi Kubudirira
Iyo email sevhisi inopa nzvimbo inokwikwidza. Zviri kumberi-kufunga kweExpactTarget kutarisisa kutsigira kwevatengi uye sevhisi. Unogona kutumira email kubva kune chero nhamba yevapi vevhisi veemail paInternet… zvinoita kunge 1 iri kubuda vhiki rega rega izvozvi. ExactTarget yakazvitsauranisa kubva kune akawanda ESPs nekwaniso yekugonesa yakagadziriswa, ine simba meseji na ari akaomesesa uye anokurumidza kupfuura anotungamira mail manejimendi masisitimu muindasitiri.
Sezvo ndashanda kuExpactTarget, ini ndinogona kukuudza kuti ndiyo imwe yevanogona kwazvo uye makambani anotungamirwa mushe muIndipolis. Ini ndinoremekedza zvakanyanya timu iriko uye ndainakidzwa nenguva yangu nekambani.
Uyu ndiwo musiyano muhombe pamusika… kambani inosimudzira kugona kwayo kushandira mutengi wavo, kwete kungovapa chigadzirwa. Ini ndakanyora pamberi peiyo iyo kiyi kune SaaS haizi papuratifomu chete - asi inogonesa vashandisi kuti vawedzere chikuva.
3sixty yave nzvimbo yekusarudzika yevatengesi veemail kuti vataure nevezera ravo kuti vakurukure nyaya dziripo mukushambadzira kana kubvunza mibvunzo kwatiri nezve software, mashandiro ayo kana chero nyaya dzavari kusangana nadzo mukushandisa ,? akadaro Stephanie Zircher, shamwari yakanaka uye ExactTarget's Director we3sixty. Kuunzwa kweRedOffice kusvika pamakumi matatu nematanhatu kunopa indasitiri chete-inomira pasocial network iyo inopa chete vatengi chete dzidzo, zvikumbiro zvekutsigira uye kubatana kwepamhepo.
Kunze kwekunakidzwa mashandiro, iko kushandiswa kwechigadzirwa kwakasarudzika futi - neese yega ficha yakarongedzwa zvakarongeka mupaneru payo. Iko kunyorera kwakanaka:
IMHO, Makambani makuru ane mavhoriyamu makuru eemail haazowane ari nani emupi webasa reemail pamusika. Kune vamwe vakwikwidzi vakakura kunze uko, asi ExactTarget inzvimbo yekumusha inodiwa.
Ive neshuwa yekuverenga iyo yese Press Regedzera pane ExactTarget's BackOffice.
Tags: isaaclaura lippaypew kutsvagisa
Ndiani Anotsanangura Tekinoroji Kambani Yako?
Jul 10, 2009 pa 9: 52 AM
Ndizvozvo . kune vakwikwidzi pamusika asi .. ExactTarget> vamwe
Jul 11, 2009 pa 10: 13 AM
Great post. Ndanga ndichishandisa webhubhu kwemwedzi mishoma uye ndiri kunetseka nazvo pane imwe yemasaiti andinoshanda. Zvakatora kutya mwedzi mishoma kugadzirisa dambudziko remufundisi. Basa revatengi rashanda nemusunguri wangu zvakanyanya sezvinobvira, zvisinei ivo vaizeza kuti vagadziri vavo vatarise nyaya iyi.
Jul 13, 2009 na1: 37 PM
Kutenda nemashoko emutsa nezve ExactTarget. Isu tese tinodada chaizvo nezvatiri kuramba tichiita ipapo. Stephanie inyanzvi yedombo zvechokwadi. (kuravira kukuru mumimhanzi zvakare)
Sevhisi uye rutsigiro ingangodaro chimwe chezvinhu zvinonyanya kukosheswa zveSawaS. Nhasi, mabhizinesi ezvese saizi anovimba nesoftware yavo seyakakosha mamishinari. Izvo hazvigone kusiiwa kune mukana, kana kusavimbika kwemhinduro dzekumba dzakakura pasina munhu kumashure kwako. Sekutaura kwaScott McCorkle, izvi zvinofanirwa kunge zviri 'kugara' zviripo.
Jul 13, 2009 na2: 29 PM
Iwe unotengesa, Chris! Ini ndinofunga wakanyatsotaura nezve sevhisi uye rutsigiro urwo rwusingakoshese. Uye kudos kuna Scott McCorkle - iye murume mukuru uye akanyatso 'shandura chikepe' uye ari kunanga ExactTarget munzira huru. Vakuru vanhu uko!